“Lalaon’ny Nosy 2019”: nanome 5 tapitrisa Ar ho an’ny Barea ny minisitra Naina - ewa.mg
News - “Lalaon’ny Nosy 2019”: nanome 5 tapitrisa Ar ho an’ny Barea ny minisitra Naina
Mialoha ny hiaingan’ny Barean’i Madagasikara, hiatrika ny “Lalaon’ny Nosy”, atsy Maorisy, noraisin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, mpiahy ny baolina kitra, Andriantsitohaina Naina, niaraka amin’ireo mpikambana ao amin’ny “comité de normalization”, teny amin’ny birao fiasany eny Anosy, ny alatsinainy lasa teo, ireo mpilalao rehetra. Tamin’izany ny nanoloran’ny minisitra lelavola 5 tapitrisa Ar ho azy ireo. Tanjona ny hampisy faharisihana ho an’ireo mpilalao. “Andraikitra goavana ny eo an-tsorokareo. Mila manome vokatra tsara ny tsirairay», hoy ny minisitra, tamin’ireo mpilalaon’ny Barean’i Madagasikara, hiezaka hanao izay azony atao hanohanana ny Barean’i Madagasika. Tsiahivina fa anisan’izany ny ho fampitaovana ireo mpilalao. Miteraka resaka maro mantsy ny fitafian’ny Barean’i Madagasikara hiatrika ity « Lalaon’ny Nosy 2019 » ity. Nijery ny fanazarantenan’ny Barea, tetsy Mahamasina, omaly, ny minisitra mpiahy. Tsiahivina fa hanomboka ny 19 ka hatramin’ny 28 jolay ho avy izao ny fifaninanana. Marihina fa anisan’ny hifaninanana amin’ity ny hazakazaka am-bisikilety, ny baolina kitra, ny volley-ball, ny lomano, ny voile, ny atletisma, ny badminton, ny baolina lavalava, ny basikety, ny beach-volley, ny ady totohondry, ny fibatana fonjamby, ny judo ary ny tenisy.
L’article “Lalaon’ny Nosy 2019”: nanome 5 tapitrisa Ar ho an’ny Barea ny minisitra Naina a été récupéré chez Newsmada.
Fisongonana nitera-doza :: Dimy lahy mpandeha taksiborosy maty tsy tra-drano
Namoy ny ainy teo no ho eo ny lehilahy dimy anisan’ ireo mpandeha tao amin’ny taksiborosy marika “Mercedes Sprinter” nivadika tany amin’ny lalam-pirenena fahafito, tany Sandrakely hihazo an’Ihosy, tamin’ny alin’ny zoma lasa teo. Ankoatra azy ireo, olona efatra ambin’ny folo, miandahy miambavy ary ankizy no naratra. Tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany alina no nitrangan’ny loza. Nidina teny an-toerana nanao ny angom-bao avy hatrany ireo zandary avy eny Andonaka. Nitohy ny ampitso maraina (Naotin’ny fanoratana: sabotsy) ny fizahana. Nianatsimo ity fiara fitateram-bahoaka. Niray lalana taminy kamiao iray nikasa haka omby any Sakaraha. “Nisongona an’io kamiao io ilay taksiborosy saingy tsy nahavita izany noho ny fisiana dongona teo amin’ny arabe. Niala an’iny dongona iny izy ka nikasoka tamin’ny ilany havian’ny kamiao. Tafavoaka ny lalana iry fiara marika “Mercedes Sprinter” ka nivadika ambony ambany teo amin’ny tatatra. Voamarina ny fisian’ny fandehanana mafy nataon’ity farany”, hoy ny zandary nanao ny fitsirihina. Nipitika avy tao anaty fiara ireo mpandeha dimy ka maty tsy tra-drano. Nisy tamin’izy ireo no nitontona teny amin’ny dimy metatra miala ny fiara. Ny roa lasa teo anelanelan’ny vy fasiana entana izay nipitika avy teny amin’ny fiara ihany koa. Mpihavana nikasa hamonjy tsena sy hividy omby any Ihosy ny telo tamin’izy dimy lahy ireo. Anisan’ireo naratra mafy ny mpamilin’ny taksiborosy ary vaky loha mihitsy ny mpamily mpanampy. Voa ihany koa ny lehilahy iray tao amin’ny kamiao. Ny mpamily nitondra ity farany no voatazon’ny zandary vonjimaika atao famotorana. L’article Fisongonana nitera-doza :: Dimy lahy mpandeha taksiborosy maty tsy tra-drano est apparu en premier sur AoRaha.
Fifanomezan-kasina: mbola mety ho lavitry ny afo ny kitay
Efa zary miroborobo fatratra, ankehitriny, ny fampiasana ny tambajotran-tserasera isan-karazany hoenti-mifanakalo sy mifampita vaovao. Tranga tena nisy vao haingana. “Ianareo maniry ny hianatra hitendry valiha, tongava…”, hoy ilay fampahafantarana. Samy naneho ny heviny ny rehetra. Fa ny tena nahavariana, nisy tamin’ireny nanontany: “misy sarany ve?”! Raha fampianarana hitendry gitara na piano na hitsoka saksôfôna no nampahafantarina, azo antoka fa tsy hisy na iray aza hanontany tahaka io. Azo antoka ihany koa fa tsy maintsy hisy ny hanontany “ohatrinona ny “écolage” ?” !Hatramin’izao, mbola miraikitra amin’ny Malagasy sasany ny fanivaivana ny momba azy. Fa angaha tsy mendrika omen-kasina mihitsy ny kolontsaina malagasy fa ny an’ny vazaha ihany no sahaza sy sandaina amin’ny « écolage » ? Na, raha vao an’ny Malagasy dia zaraina maimaim-poana fa raha an’ny vahiny tsy maintsy vidiana ?Mbola tena tsy fantatry ny Malagasy sasany mihitsy ny atao hoe « hasina », hany ka tsy omeny lanja. Tsy mitovy velively ny toeran’ny “hasina” eo amin’ny Malagasy sy ny “écolage” eo amin’ny vahiny, saingy, noho ilay fampitahana an-jambany no niteraka io fahadisoana goavana be io. Tsy misy teny na anarana amin’ny teny vahiny ka mahasolo na mitovy dikany amin’ny hoe “hasina”.… Tsy mahagaga raha hatramin’izao no tsy afaka mifanome hasina ny samy Malagasy sasany. Tsy mahazendana raha misy Malagasy efa hita fa tena maty hasina izao kanefa tsy mahatsiaro sy tsy mahatsapa izany akory… Diniho tsara ange e!HaRy RazafindrakotoL’article Fifanomezan-kasina: mbola mety ho lavitry ny afo ny kitay a été récupéré chez Newsmada.
Alliance française sy Telma: fiofanana momba ny sehatrasa maro
Fahombiazana no azo lazaina ny andiany faha-5 momba ny fanofanana arak’asa nomen’ny Alliance Française sy ny Telma ireo tanora sy mpandraharaha, ny 27 sy 28 aogositra 2021 teo. Natao indrindra io fanofanana io ho fampahafantarana ireo tanora mpianatra sy ny hafa rehetra mitady asa, na mamorona asa, na miova sehatrasa36 ireo nandray anjara nandritra ny fiofanana, izay nampahafantatra ireo sehatrasa samy hafa, anisan’izany, ohatra, ny karazana orinasa eo amin’ny fifandraisana ; ny sekoly ambony, fandraharahana, foibe fanofanana maro hafa, sns. Maro ireo sehatrasa nampahafantarina tamin’izany, naharaisana CV mahatratra 10 000.Nandritra io fotoana io koa ny nanaovana lahadinika samy hafa, toy ny momba ny fizahantany, ny fitaterana, ny varotra amin’ny teknolojia’ny fifandraisana ankehitriny (e-commerce), fianarana ambony any ivelany, fitantanam-bola, fitantanana orinasa, asan’ny mpanoratra, fandraharahana, sns. Manampy ahitan’ireo zatovo hevitra ny lahadinika natao tamin’izany, hisafidianana izay sehatrasa sahaza. R.MathieuL’article Alliance française sy Telma: fiofanana momba ny sehatrasa maro a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – «THB ligue des champions»: nisaraka ady sahala ny Adema sy ny Jet Mada
Tsy nisy nivoaka ho mpandresy fa nisaraka ady sahala samy tsy nisy nitoko, 0 no ho 0, ny AS Jet Mada Itasy sy ny AS Adema Analamanga, nandritra ny andro fahatelo, fifanintsanana isam-bondrona, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “THB ligue des champions”, taranja baolina kitra.Fihaonana notanterahina, ny asabotsy lasa teo tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Tsy namaly ny hetahetan’ireo mpijery ny fihaonan’ny roa tonta satria tsy niady fa toa nifampatahotra, hany ka lasa dakadaka be fotsiny ny hita tamin’izany. Nisy ihany ny rindran-damina nataon’izy ireo, saingy rava izany rehefa teo anoloan’ny faritra tsy azo ivalozana. Teo amin’ny fizaram-potoana faharoa vao nisy ny fanafihana tsara nataon’ny andaniny sy ny ankilany, na tsy betsaka loatra aza izany, tsy nahitana baolina maty ihany koa.Tany amin’ny kianja Rabemananjara Mahajanga, lavon’ny Fosa Jr Boeny, tamin’ny isa mazava, 3 no ho 1, ny Zanakala FC. Tany Toliara, nitranga ny tsy nampoizina satria resin’ny 3FB Atsimo Andrefana, tamin’ny isa tokana 1 no ho 0, ny Cnaps Sport. Nisaraka ady sahala samy tsy nisy nitoko kosa ny Ajesaia sy ny FC Ilakaka, tany Tsiroanomandidy. Tompondaka L’article Kitra – «THB ligue des champions»: nisaraka ady sahala ny Adema sy ny Jet Mada a été récupéré chez Newsmada.
HCC : Nisy saika hitoraka « cocktail molotov »
Nihaodihaody teo amin’ny manodidina ny fitsaràna avo momba ny lalam-panorenana ny roa lahy, hafahafa teo imason’ny mpitandro ny filaminana ny nahita azy ireo. Natsoina mba hanaovana fisavàna taratasy, kinanjo nitsoaka avy hatrany tao anatin’ny alim-ben’ny talata hifoha alarobia teo. Raikitra ny fanenjehana azy ireo ka ny iray no voasambotra, mbola niaraka tamin’ny kitapo teny am-babeny io farany. Natao ary ny fisavàna ka teo no nahitàna « cocktail molotov ». Mazava ho azy fa tsy maintsy nampifandraisina avy hatrany amin’ny asa fanakorontanana izay misy mikasa amin’izao fotoana ny zava-misy ary dia nosamborina avy hatrany ilay tovolahy. Eny amin’ny borigadin’ny zandarimaria izay misahana ny fanadihadiana momba ny raharaha heloka bevava no nentina ilay lehilahy izay ahiana ho mikasa ny hitoraka baomba ny andrim-panjakana etsy Ambohidahy. Ilay namany kosa tsy hita izay nalehany tao anatin’ny haizim-be ary inoana fa hizotra mankany amin’ny fahitàna azy ny fanadihadiana izay efa nandeha omaly tetsy Fiadanana. Isan’ny andrasana amin’ity raharaha ity ny mety ho anaran’ny atidoha nikotrika na koa izay mety ho nanakarama ireo tovolahy ireo. Raha tsiahivina dia nisy ny fandorana fiara teo ivelan’ny Hcc, roa andro talohan’ny namoahan’io andrim-panjakana io ny vokatra ofisialin’ny fifidianana. Raha ny fijerin’ny mpanara-baovao dia endrika fanakorontana hatrany no miseho tato ho ato ary mety ho ny fampitahorana ny mpikamban’ny HCC no tena tanjona. Efa nohamafisina ny fiarovana ny toerana misy io andrim-panjakana io sy ny mpikambana ao anatiny rehefa fantatra ny fisian’ny endrika fanakorontanana. D.RL’article HCC : Nisy saika hitoraka « cocktail molotov » a été récupéré chez Midi Madagasikara.